EPRDF: Ra'sal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed oo markale Hoggaaminayo xisbiga talada dalka Itoobiya haya - BBC News Somali
EPRDF: Ra'sal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed oo markale Hoggaaminayo xisbiga talada dalka Itoobiya haya
Lahaanshaha sawirka EPRDF Officials
Image caption Dr Abiy Axmed
Ra'isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa markale loo doortay guddoomiyenimada xisbiga talada dalka Itoobiya haya ee EPRDF oo ay ku bahoobeen afarta xisbi ee ay leeyihiin qowmiyadaha Oromada, Amxaarada, Tigreega iyo Shucuubta Koonfureed.
Xisbiga EPRDF oo shirweynahiisa 11aad maalintii labaad uu uga socdo magaalada Hawassa ayaa waxaa lagu falanqeeyey arrima ay ka mid yihiin:
Xaaladda siyaasadeed uu dalku haatan ku sugan yahay
Xaaladda Amni uu dalku haatan ku jiro
Dagaal beeleedyada dalka ka taagan iyo dhibaatooyinka ka abuurmay
Kobaca dhaqaalaha dalka sidii wax looga qaban lahaa iyo
Isbeddellada siyaasadeed ee dalka ka billaawday sidii loo derder gelin lahaa.
Afarta xisbi ee ODP, TPLF, ADP iyo SPDP oo shirar gooni gooni ah yeeshay waxay dib u soo dhiseen hoggaanka sare ee xisbiyadaasi iyo xubnaha uga mid noqon lahaa xisbiga EPRDF ee ay ku bahoobeen.
Waxayna afarta xisbi siyaasadda ka fadhiisiyeen rag badan oo rug caddaa ahaa oo ka soo qayb qaatay aasaaska uruurradaasi kana soo qayb qaatay dagaalkii lagula jiray dowladdi Mangistu H/Maryam, oo si sharaf leh lagu sagootiyey boosaskoodina lagu beddelay aqoonyahanno dhalinyara u badan.
Shirweynahan maxaa laga filayey?
Dalka Itoobiya tani iyo marka uu ra'isal wasaare ka noqday Dr Abiy Axmed waxaa ka socday isbeddello siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo saameyey guud ahaan waddamada geeska Afrika.
Hase ahaatee, dalka gudahiisa waxaa ka jiray dagaallo beeleedyo qayba badan oo waddanka gudahiisa ah ka dhacayey oo ay dad badan ku nafwaayeen malaayiin qofna ay ku barakaceen.
Haddaba isku dhacyada beelaha ee soo cusboonaaday ayaa waxay afarta xisbi ee siyaasadeed dhexdooda ka abuurtay madmadow siyaasadeed oo shaki gelisay inuu ra'isal wasaaraha cusub uu guddoomiyenimada xisbiga EPDF uu sii haynayo inkale.
Iyada oo shirkan marka uu billaawdayna waxyaabaha sida weyn loo hadal hayeyna ay ka mid ahayd inuu Dr Abiy Ahmed uu cadaadis xooggan uu kala kulmi doono xisbiyada ku bahoobay EPRDF.
Shirweynaha 11aad ee xisbiga EPRDF uga socda magaalada Hawassa oo ku taallo Koonfurta Itoobiya oo maanta galay maalintiisi labad waxaa markale waxaa cod aqlabiyad ah Guddoomiyenima looga doortay Dr Abiy Axmed.
Waxuuna shirweynuhu isla qaatay in gacan bir ah lagu qabto dagaallo beeleedyada dalka bilihi ugu dambeeyey ka socday cid kasta oo ka dambeysay lala xisaabtamo sharcigana la horkeeno.
Dadki dagaalladaasi ku waxyeelloobayna ay dowladdu si degdeg ah deegaannadooda dib ugu celiso ayna ka hortagto wax kasta oo hadda kaddib sababi karo iskudhacyo kale oo beelaha ka dhex dhaca.
Lahaanshaha sawirka EPRDF OFFICIAL
Image caption Afarta Guddoomiye ee xisbiyada ku bahoobay EPRDF
Shirweynuhuna waxaa la filayaa inuu doorto guddoomiye ku xigeenka uu yeelan doono xisbiga EPRDF, iyada oo shirweynaha 11-aad ee xisbiga maalinta barri ah la soo gabagabeeynayo.